Guddoomiye Jawaari oo aaday safar dibadda ah | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Guddoomiye Jawaari oo aaday safar dibadda ah
Guddoomiye Jawaari oo aaday safar dibadda ah
Afhayeenka golaha shacabka jamhuuriyada federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Sheekh Cismaan (Jawaari) ayaa maanta u amba-baxay dalka Koofur Afrika, isagoo ka qeybgali doona shirka guddoomiyeyaasha baarlamanada Afrika ee Pan-Africa Parliament oo Soomaaliya xubin ka tahay.
Mudane Jawaari ayaa xusay in shirkaas uu yahay mid muhiim ah oo looga hadlayo arimaha dhalinyarada qaaradda Afrika, sidaa awgeedna Soomaaliya arintaas si weyn u daneynayso maadaama tirada ugu badan ee dadka Soomaaliyeed ay dhalinyaro yihiin isla markaana heerka shaqo la’aantana uu aad u sareeyo.
“Safarkeyga waxaa uu ku saabsan yahay in aan ka qeybgalo shirka guddoomiyeyaasha baarlamaanka Afrika oo sanadkii mar la qabto kaas oo socon doonta ilaa 11 bishan,” ayuu yiri Jawaari.
Guddoomiyaha golaha shacabka mudane Jawaari ayaa sheegay in shirka looga wada arinsan doono sida dhalinyarada dalalka Afrika loogu diyaarin lahaa in ay noqdaan hoggaamiyeyaal wanaagsan oo wadamadooda u horseeda maamul wanaag iyo ku dhaqanka sharciga.
Previous articleShir lagu diyaarinayo Istiraatiijiyadda Waxbarashada Madaniga ee Dib-u-eegista Dastuurka oo Muqdisho ka furmay
Next articleGuddoomiyaha Gobolka oo la hadlay dad dibad baxyo dhigayay